Shiinaha Warshad Cad Cad Transparent Perspex Plexiglass Acrylic iyo alaab-qeybiyeyaasha. Donghua
Crystal cad, hufan oo aan midab lahayn, xaashidan acrylic waa mid aad u badan oo ku habboon ku dhowaad codsi kasta. Waa beddel caan ah oo loogu talagalay muraayadda sababtoo ah culeyskiisa fudud iyo caabbinta saameynta weyn. Sida dhammaan acrylics, xaashidan si fudud ayaa loo goyn karaa, loo samayn karaa loona samayn karaa. Donghua badanaa waxay bixisaa xaashida acrylic-ka ee la soo saaray oo laga heli karo xaashiyo buuxa, xaashiyo la jarjaray oo cabbirro kala duwan leh, fasallo, iyo qaabab.
• Waxaa lagu heli karaa xaashida 48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830 mm / 1220 × 2440 mm)
• Waxaa laga heli karaa .031 ″ ilaa .393 thick (0.8 - 10 mm) dhumucda
• cabbirka caadooyinka, dhumucda iyo midabka sidoo kale waa la heli karaa
Xaashida cad ee loo yaqaan 'Plexiglass Acrylic Sheet', Xaashida caaga ah ee Transparent
Acrylic, oo sidoo kale loo yaqaan 'Plexiglass', waa aaladda loo yaqaan 'thermoplastics' waxaana inta badan lagu bixiyaa go'yaal ahaan beddel fudud ama burburin u adkaysta muraayadaha. Waraaqaha looxa ee loo yaqaan 'Acrylic Sheets' waxay muujinayaan astaamo u eg muraayad-cad, dhalaal, iyo hufnaan-laakiin kala badh culeyska iyo marar badan saameynta caabbinta muraayadaha. Way fududahay in la been abuuro, oo si fiican loogu xiro xabagta iyo dareeraha, waana sahlan tahay in lagu habeeyo qaab-dhismeedka iyada oo aan lumin caddaynta indhaha.
Donghua badanaa waxay bixisaa xaashida acrylic-ka ee la soo saaray oo laga heli karo xaashiyo buuxa, xaashiyo la jarjaray oo cabbirro kala duwan leh, fasallo, iyo qaabab.
Magaca Badeecada Xaashida cad ee loo yaqaan 'Plexiglass Acrylic Sheet, Transparent Plastic Sheet' - "PMMA, Lucite, Acrylite, Perspex, Acrylic, Plexiglas, Optix"
Magaca Dheer Polymethyl Methacrylate
Waxyaabaha 100% Virgin PMMA
Cabir 1220 * 1830mm / 1220x2440mm (48 * 72 gudaha / 48 * 96 gudaha)
Tdillaacid 0.8 0.8- 10 mm (0.031 gudaha - 0.393 gudaha)
Gudbinta Iftiinka 92%
Nooca looxa Ka Baxday
Gaarsiinta Waqti 5-10 maalmood ka dib xaqiijinta amarka
DHUA Xaashida loo yaqaan 'Acrylic Sheet' Ayaa Si Sahlan Loogu Sameeyay
Xaashidayada loo yaqaan 'acrylic sheet' ee isu eg ayaa si sahal ah loo goyn karaa, loo jari karaa, loo qodin karaa, loo safeyn karaa, laaban karaa, la farsameyn karaa, heerkulbeegna laga dhigi karaa, waana la adkeyn karaa
Jaangooyada Cut-to-Size ee caadiga ah iyo dulqaadka ballaaradu waa +/- 1/8 ″, laakiin caadi ahaan way ka saxsan yihiin. Fadlan nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay sax ka ballaaran. Dulqaadashada xajmiga xajmiga looxa waa +/- 10% wayna ku kala duwanaan kartaa xaashida oo dhan, laakiin kala duwanaanshaha ayaa sida caadiga ah ka yar 5%. Fadlan tixraac dhumucda xaashida magaca iyo dhabta ah ee hoose.
Translucent, Transparent or Opaque Colored Acrylic Plexiglass (Muuqaal) Avalilable
· Transparent Acrylic Plexiglass = Sawirada waxaa lagu arki karaa xaashida (sida muraayadda midabka leh)
· Translucent Acrylic Plexiglass = Iftiinka & Hooska waxaa lagu arki karaa iyada oo loo marayo Xaashida.
· Opaque Acrylic Plexiglass = Iftiin iyo sawirro midna laguma dhex arki karo xaashida.
Xaashida loo yaqaan 'acrylic sheet' ee loo yaqaan 'multi-and all-purpose acrylic' oo leh waxyaabo badan oo shaqeynaya, xaashida loo yaqaan 'acrylic sheet' oo la soo saaray ayaa leh adeegyo badan oo kala duwan oo ku saabsan adeegsiyo badan oo degaan, ganacsi, warshadeed iyo xirfadba leh.
Codsiyada caadiga ah:
Nalalka, waardiyeyaasha & gaashaammada, calaamadaha, iftiiminta, muraayadda muuqaalka sawirka, guddi hagitaan khafiif ah, calaamado, soo bandhig tafaariiqeed, xayeysiis iyo barta iibka & iibka, waababyada ganacsiga iyo kiisaska bandhigyada, wejiga hore ee golaha wasiirrada iyo mashaariic kale oo guryaha DIY ah. Liistada soo socota waa uun tusaale.
Displays Bandhigyada barta-iibsiga ■ Bandhigyada bandhigga ganacsiga
Covers Khariidadaha / sawirrada daboolida ■ Dhexdhexaadinta qaabeynta
Panels Xarkaha qalabka elektarooniga ah gla Muraayadaha mashiinka
Gla Muraayadda nabdoonaanta display Qalabka bandhiga tafaariiqda iyo kiisaska
Ers Buug-yaraha / hayayaasha xayeysiinta enses Lenses
Guards Dhalaalada ilaaliyaha ■ Fidiyaha qalabka korontada ku shaqeeya
Calaamadaha equipment Qalabka hufan
■ Moodooyinka guards Ilaalada Sneeze
Windows Daaqadaha muujinta iyo guryaha covers Daboolida qalabka
Xaashida loo yaqaan 'acrylic sheet' oo la soo saaray ayaa lagu soo saaray habka wax soo saarka. Miiraha xarkaha looxa ayaa loo kululeeyaa tiro la dhalaaliyay oo si isdaba joog ah loogu riixayo dhinta, halka ay ku taalo go'aaminta dhumucda xaashida la soo saaray. Marka la dhinto, cufka dhalaalaya ayaa dabciya heerkulka oo waa la jarjaabi karaa oo la jari karaa xajmiga xaashida loo baahan yahay.
xaashiyo cad oo acrylic ah
xaashida looxa si hufan
xaashida 'perspex sheet'
go'yaal akrilik ah oo caag ah
warqad akrilik hufan